Should Kwesịrị Designhapụ Atụmatụ 2.0 Web? | Martech Zone
Elliot Jay Stocks na-etinye mkpu agha maka ndị na-emepụta… hapụ anya Web 2.0 ma lụọ ndị ahịa gị ọgụ maka ya.
MARA: Na na na Elliot saịtị, imewe bụ nnọọ pụtara.
Ekwetaghị m na Elliot na a ga-ebibi ya. Na-arụ ọrụ n'ọma ahịa, ị matara na e nwere echiche ehi iji chepụta. Likelọ ọrụ dị ka Apple nwere ụfọdụ akpa miri emi ma nwee atụmanya nke imewe ọgụgụ isi metụtara akara ha. Onye na-azụ ya na-atụ anya na atụmatụ ndị metụtara ngwaahịa Apple, nkwakọ ngwaahịa na ahịa ga-emebi ala ọhụrụ. (Ewezuga mkpuchi ojii na-enwu gbaa n’otu akụkụ ọnụ na-ekwuchitere… Echere m na ọ dị nzuzu).
Ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ kachasị mma iji soro ụzọ. Dị nnọọ ka ejiji na-agbaso usoro, otu a ka esi emepụta. 'Ìgwè' ahụ nwere mmasị na aesthetics ndị na-egosi na ọ na-emetụta otu ụdị ma ọ bụ nkà na ụzụ. Mgbe m batara na ngwa ohuru dika Ngwakọta or Ugochukwu, tupu m gwuo n'ime ngwa ahụ, enwere m anya nke ọma na nke a bụ ngwa wuru na teknụzụ kachasị ọhụrụ.
Ndi mmadu na ihe okike di nkpa, ma mgbe onye obula na-eyi akwa jeans buut ma i gosiputa n’ime ala, ndi mmadu ghaju aju aju. Ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ, nke a bụ omume mmadụ. N'ụbọchị a ebe ndị na-azụ ahịa na-agbagharị ngwa ngwa Myspace na Facebook, ma ọ bụ Twitter na Tumblr, ọ dị mkpa na imewe gị ulatesomie na ị nakweere nke kachasị ọhụrụ fashion na weebụ.
Ana m asọpụrụ echiche Elliot dị ka onye omenkà nwere ọgụgụ isi na onye nrụpụta pụrụ iche, mana m ga-akwado ụlọ ọrụ ka ha ghara ihichapụ Web 2.0 imewe ugbu a. Ọbụna Elliot kwetara na e nwere ezi ihe mere ị ga-eji soro ìgwè ehi. Mụ na Elliot kwenyere na ezigbo nsogbu: Otu esi arụ ọrụ n'ime oke aesthetics Web 2.0 ma wepụta dị ka nke mbụ. Ma oburu na ichoro ihe ndi bu isi, Elliot weputara ihe ngosi di nma na ihe omuma nile nke Web 2.0!
Tags: elliot jay ebuka2 web2.0 webweb imewe
Nov 25, 2007 na 3:50 PM
Ahụkarị myopic na ịchọ ọdịmma onwe onye naanị. Agụrụ m ọkwa ya wee lelee ihe ngosi ya na-atụ anya inweta ezigbo nghọta mana achọtara m ọkwa nke kwusara ndị ukwe nke ndị FOWD ya ntị; otu ndi mmadu ndi mmadu choro inwe nnwere onwe okike n'enweghi nchegbu banyere ebumnuche ahia. O doro anya na ọ bụ ụdị ntanetị 2.0 nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-elekwasị anya na mmeri nke onyinye okike kama itinye uche na ntinye ego maka ahịa nke onye ahịa ha.
Aga m etinyekwu uche karị Jakob Nielsen na Iwu Nielsen: “Ndị mmadụ na-eji weebụsaịtị ndị ọzọ eme ihe karịa nke gị (yabụ ime ka saịtị gị kwekọọ na saịtị ndị ọzọ ga-eme ka ọrụ gị dịkwuo elu wee bụrụ nke ga - enyere gị aka iru ebumnuche azụmahịa gị.)
Nov 25, 2007 na 3:51 PM
Lee, ihe ịma aka ahụ bụ na ọtụtụ ndị na-abụghị ndị na-emepụta ihe na-eme atụmatụ nke saịtị ha .. offọdụ n'ime anyị ga-enwe mmasị ịhazi saịtị dịka Maazị Stocks, agbanyeghị na anyị enweghị nka na / ma ọ bụ mmefu ego iji mee ya.
Mgbe a na-ekwu maka “Web 2.0”, ee emepụtaghị imewe, agbanyeghị, anyị niile ghọtara anya ahụ: ihe na-egbu maramara, ahịrị, ọnụ ọnụ agbịrịgba, ntụgharị uche, na ọkụ ndị na - apụta ... . Chọpụta, onye ọ bụla na-awụli elu n'ụgbọ wee soro anụ ọhịa na ya, agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị elele ụzọ ndị ọzọ anya, anyị nwere nnukwu agba agba (nke nwere ike ọ gaghị arụkọ ọrụ ọnụ), enweghị oke omimi, na mwute Webdings ma ọ bụ njọ, clip-art…
The web 2.0 anya bụ maka ndị ọzọ anyị na-aghọta na anyị enweghị nkà nke ezigbo onye mmebe, ma ghọta uru nke itinye ezigbo mgbalị n'ime ya karịrị ịgbanwe ederede na ndabara WordPress isiokwu…
Nov 25, 2007 na 9:02 PM
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa WordPress (ọ dị mma gbasara CSS) bụ na ọ na-ekepụta ọdịnaya yana ọdịnaya. Nke pụtara na ị nwere ike ibudata isiokwu mara mma ma ghara ichegbu onwe gị gbasara imewe karịa.
M n'ihi na otu onye m ugbu a na-agbalị na-aga minimalistic ụzọ, na m na-egwu gburugburu na a ụdị-eche nanị isiokwu.
Nov 25, 2007 na 8:58 PM
Elliot nwere nke kacha mma, kachasị eche echiche site na WordPress isiokwu m wee hụ. Tụnanya ma Na-akpali akpali.
Nov 25, 2007 na 9:20 PM
Ekwenyere m, modifoo! M ihere na m imewe mgbe na-achọ na otu onye nke ọma-e ka ya!